स्मरण शक्ति कसरी बढाउने ! पढ्नुहोस् स्मरण शक्ति बढाउन के गर्ने ? - चारदिशा
September 21, 2019 चारदिशा बिबिध
स्मृतिका तीन क्रियाहरू हुन्छन्– अङ्कन (एन्कोडिङ), धारणा (रिटेन्सन) तथा पुनःस्मरण (रिकल)मा कुनै त्रुटि भएमा स्मरण शक्ति कमजोर हुन्छ । स्मृतिलोपलाई दुई भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ।
(१) सामान्य विस्मृति : उमेर ढल्कँदै गएमा मानिसको स्मरण शक्ति पनि केही मात्रामा घट्दै जान्छ । यसले मानिसको दैनिक जीवनमा खासै असर गर्दैन ।
(२) बिर्सने रोग (एम्नेसिया) : यस्तो रोग लागेको व्यक्तिले आफ्नो नाम, ठेगाना, बार, गाउँ आदिजस्ता कुराहरू बिर्सन सक्छ ।
यस रोगको लक्षणमा कसैको नाम ठेगाना बिर्सिनु । केही दिनअगाडि भए–गरेका कुराहरू बिर्सिनु । पढेका, देखेका, सुनेका कुराहरू याद नआउनु । कुनै ठाउँमा सामान राखेर बिर्सिनु । नयाँ कुराहरू जस्तै : भाषा, सङ्गीत, गायन, नृत्य, अभिनय कला आदि सिक्न गाह्रो हुनु । पढेर याद राख्ने इच्छा नहुनु । कुनै पनि कुरा एकपटक भन्दा नबुझ्नु, अरुचि, आलस्य, चिडचिडापन, निराशाको भाव, घबराहट आदि हुन्छ ।
के तपाईंले कहिल्यै यस्तो महसुस गर्नुभएको छ कि केही जानकारी तपाईंको सम्झनाबाट हराइसकेको छ रु वा हुन सक्छ, तपाईंलाई थाहा छ, यो त्यहाँ छ । तर, तपाईले यो फेला पार्न सक्नुहुन्न ।
एक स्मृति पुनः प्राप्त गर्न असमर्थता बिर्सनुको सबैभन्दा साधारण कारणहरूमध्ये एक हो । यस सिद्धान्तका अनुसार, प्रत्येकचोटि नयाँ सिद्धान्त गठन हुँदा मेमोरी ट्रेस सिर्जना हुन्छ । क्षय सिद्धान्तले सुझाव दिन्छ कि समयको साथ, यी मेमोरी ट्रेसहरू फिका र हराउन थाल्छन् । यदि जानकारी पुनः प्राप्त र पूर्वाभ्यास गरिएको छैन भने यो अन्ततः हराउनेछ ।
दुईवटा आधारभूत प्रकारका हस्तक्षेपहरू हुन सक्छन् । पूर्व अधिग्रहण हस्तक्षेप तब हुन्छ, जब नयाँ अधिग्रहीत जानकारी पुरानो सम्झनामा हस्तक्षेप गर्छ ।सक्रिय हस्तक्षेप तब हुन्छ, जब पुरानो जानिएको जानकारीले नयाँ यादहरू बनाउन कठिन बनाउँछ ।
दैनिक शरीरलाई आवश्यक पर्ने पर्याप्त पानी पिउने । खानेकुरामा कार्बोहाइड्रेटयुक्त खानाको अभावले दिमागको क्षमता, ऊर्जा र मुड परिवर्तन गर्नुका साथै स्मरणशक्ति र श्रवण शक्तिमा पनि नकारात्मक असर पु¥याउँछ । जङ्क फुड अधिक मात्रामा खाँदा, फ्राई खानेकुरा खाँदा, बढी चिल्लो खाँदा, चुइङ्गमले पनि हाम्रो श्रवणशक्ति र स्मरण शक्तिमा ह्रास ल्याउने गर्छ । नुनले हृदयको चाल र रक्तचापलाई असर गर्नका साथै दिमाग र समग्र स्मरण शक्तिलाई असर गर्छ ।
चिनीको प्रयोग बढी गर्नाले पनि स्मरण शक्ति, सिक्ने क्षमता र श्रवण शक्तिमा ह्रास आउने गर्छ । चिया, कफी तथा धूमपानबाट टाढा नै बस्नु राम्रो । नशालु पदार्थ नखाने र मद्यपान नगर्ने । सन्तुलित पौष्टिक खाना नियमित समयमा खाने । मौसमअनुसारको फलफूल तथा तरकारीहरू खाने । अण्डा, माछा, दूध, दही, मही, चीज, मख्खन खाने । खानपानमा ध्यान दिन नसक्दा स्मरणशक्ति घट्दै जान्छ भनेपछि गएर विभिन्नप्रकारका मनोविकारहरू जस्तै, अल्जाइमर, डिमेन्सिया, डिप्रेसन र एन्जाइटीसमेतको जोखिम बढाउन सक्छ ।
नियमित व्यायाम गरेर वा घरका विभिन्न कामहरू गरेर स्मरण शक्तिलाई यथावत् राख्न सकिन्छ । स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन तथा दिमागमा रक्षात्मक प्रभाव सिर्जनाका लागि शारीरिक व्यायाम नै सबैभन्दा राम्रो र सजिलो उपाय हो । दैनिक शारीरिक व्यायामअन्तर्गत प्रातः भ्रमण, साइक्लिङ, पौडी खेल्नेलगायतका शरीर चल्ने व्यायामलाई लिइएको छ । आफ्नो समयअनुसार बिहान बेलुकी घुम्ने । शारीरिक सक्रियताले स्मरण शक्तिमा कमी आउन नदिन विशेष भूमिका खेल्छ साथै योगाभ्यास मेडिटेसन ९ध्यान० अनुलोम बिलोम, कपालभाँती गर्दा पनि सहयोग मिल्छ ।
व्यक्तिले मानसिक रूपमा स्वस्थ एवम् फुर्ती अनुभव गर्न दिनमा कम्तीमा ७ देखि ८ घन्टा सुत्ने गर्नु राम्रो मानिन्छ । अपर्याप्त निद्राले मन अस्थिर हुन्छ । दैनिक गतिविधिमा असर गर्छ । स्मरण शक्ति विकासका लागि राति अबेरसम्म जागेर नपढ्ने, राम्रोसँग निद्रा नपर्नुका धेरै कारण हुन सक्छन् जस्तै : मनमा पीर चिन्ता पर्नु, केही कुराको डरले सताउनु, कार्यालयमा तनाव वा धेरै कामको बोझ हुनु, अपर्याप्त निद्रा र थकानको कमी आदि । कहिलेकाहीँ निद्रा नपर्नुमा प्राकृतिक प्रकोप तथा मानवसिर्जित दुर्घटना, विनाश वा नजिकका व्यक्तिको मृत्यु पनि हुन सक्छ । पर्याप्त नसुत्दा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घट्छ । डिप्रेसन, डायबिटिज, मुटुसम्बन्धी रोग, डिमेन्सिया निम्त्याउँछ ।
न्युरोसाइजिस्टद्वारा लामो समयदेखि गरेको अध्ययनले रमाइलो गतिविधि जस्तै : शब्दकोश, सुडोकु, चेसले व्यक्तिको संज्ञानात्मक क्षमताको सुधार गर्न मद्दत गर्छ ।
आफैँले पहिले बेवास्ता गर्दै आएका जटिल कार्यहरू जस्तै : अप्ठ्यारो पाठ्यक्रम, दोस्रो भाषा सिक्नु, असजिलो किताब पढ्ने ती सबै समस्या समाधानको सक्रियताका साथ हरेक दिन सिक्ने र बच्चालाई पनि समान काम गर्न सिकाउने । धेरै देशमा जोखिममा रहेका बच्चालाई गहन प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान गर्न शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रमले केही हदसम्म शैक्षिक उपलब्धि गरिरहेको देखिन्छ । तर, वास्तवमा बच्चाको सामान्य बौद्धिक क्षमता सुधार गरेको देखाइएको छैन । यी कार्यक्रमले बच्चाका लागि एक राम्रो उत्तेजक वातावरण प्रदान गर्छ । उनीहरूको शैक्षिक अनुभव तीव्र बनाउँछ ।
लेखक मनोविद् हुनुहुन्छ